बिद्यार्थी नेता क्षितिज सापकोटाको एक्शन् : पोखरा स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भिसी सहित तीन जना विद्यार्थीको कब्जामा ! (भिडियो सहित) — SuchanaKendra.Com
बिद्यार्थी नेता क्षितिज सापकोटाको एक्शन् : पोखरा स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भिसी सहित तीन जना विद्यार्थीको कब्जामा ! (भिडियो सहित)
प्रकाश अधिकारी, पोखरा ।
पोखरा स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.बुद्धिबहादुुर थापा सहित तीन जनालाई विद्यार्थीले करिव पाँच घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छोडेका छन् । सोमबार पुर्व अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय सचिव क्षितिज सापकोटाको नेतृत्वमा गएका विद्यार्थीहरुले भिसी थापा सहित डिन डा. नरेन्द्र गुरुङ तथा निमित्त निर्देशक डा. राजेश अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर सोही अस्पतालमा साधारण विरामी सरह टिकट काटेर स्वाथ्य चेकजाँच गराउन बाध्य बनाएका छन् ।
अस्पतालको बेतिथी र लापरवाहीले गर्दा कतिपय सर्वसाधारण बिरामी सरकारी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै भिसीलाई त्यसको अनुुभुती गराउनको लागि नियन्त्रणमा लिईएको नेता सापकोटाले सारङ्गी न्युुजलाई जानकारी दिए । अस्पतालमा बिरामीले घन्टाँै कुरेर पनि उपचार गर्न नपाउने अवस्था छ । त्यो अवस्थाको अनुभुती गराउनको लागि भिसी, डिन र निर्देशकलाई अनुुभुती गराउनको लागि नियन्त्रणमा लिएका हौँ । अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइमा मात्रै होइन फार्मेसीमा समेत सर्वसुलभ औषधिको अभाव छ यस्तो अवस्था कहिले सम्म ? उनले प्रश्न गरे ।
साधारण विरामी सरह लाईनमा वसेका भिसीले अस्पतालको सेवा सर्वसुलभ हुन नसेको स्वीकार गरे । विरामीहरुको ठुलो भिड भएको छ यस्लाई कोप गर्न सकेका छैनौं । छिटो भन्दा छिटो राम्रो बनाउछौं भिसीे थापा भने ।यता भिसीकै आडमा लाइनमा बसेका डिन नरेन्द्र गुरुङले विरामीलाई राम्रो सेवा दिने मन्दिर भएको भन्दै सबै विरामीलाई आफ्नै छोरा छोरी आमाबावुलाई जस्तै सेवा दिनुु पर्ने बताए ।जनशक्तिको अभावले बिरामीको सेवा प्रभावित भएको गुरुङको भनाइ छ ।अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. राजेश अधिकारीले साधारण विरामी र अस्पतालको सिस्टमको अनुुभुती गरेको बताए । उनले विरामीहरुकै सेवाका लागि पहिले भन्दा अहिले धेरै सहज भएको भएपनि अझै सिस्टममा आउन नसकेको बताए ।
पोखरा १४ काजिपोखरी कि गोमा गिरीको पेट दुखेर आइतबार विहान साढे सात बजे अस्पताल आइन् । टिकट काटिन् १४८ नम्बर छ । सोमबार साढे १२ बजे सम्म पनि पालो आएको छैन् ।माझठानाका दुुर्गाप्रसाद लामिछाने १५ वर्ष देखी प्रेसरको औषधी सेवन गरिरहेका छन् । स्वाथ्य विमा पनि सोही अस्पतालमा गरेका छन् । तर त्यँहा डाक्टरले लेखेको औषधी नै पाइदैन् । फार्मेसीमा अकै औषधी दिन्छन् कसरी खाने ? थप विरामी भए कस्ले जिम्मा लिने ?